Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Minnesota oo ku gulaysatay kalinta 1 baad ee Hidaha iyo Dhaqanka iyo abal marin ay mutaysteen
OYSU Minnesota oo ku gulaysatay kalinta 1 baad ee Hidaha iyo Dhaqanka iyo abal marin ay mutaysteen
Sabti 5/30/14, Ururka Midowga dhalinta iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU, MN) ayaa caawa lagu gudoonsiyay Jamacada Minnesota abaalmarin ay ku mutaysteen kadib markii ay galeen kaalinta koobaad tartankii hidaha iyo dhaqanka dalalka Africa ee bishee hore dhexdeedi lagu qabatay Jamacada Minnesota. Tartankii kadib ayaay gudigii qabanqabadu bilowday codayntii dalalkii kugaulaystay kalinta koobad. Tartan iyo codayn dheer kadibna waxay guushu ku raacday ururwaynaha OYSU.
Hadaba ayadoo OYSU loo aqonsaday soo bandhigidii hidaha iyo dhaqankii ugu quruxda badnaa ayaa cawa waxa ay ururka lagu magacabo “Torchlight” ay gudoonsiyeen koopkii iyo shahado sharaf mujinaysa kalinta ay OYSU ka galeen ciyarihi hidaha iyo dhaqabka ee sanadka 2014.
Mamuliyinta OYSU oo ayagu ka soo qayb galay xafladii cawa guushu ku raacday ayay waxaay madasha ka soo jeediyeen khudbad ay ku mujinayeen sida ay ugu faraxsanayihin gusha u soo hooyatay urur waynaha OYSY.
Faraca suganta OSYU Minnesota ayaa waxaay caan ku yihiin suganta oo ay alaba ka haqabtiraan bulshada Somalida.
Isku soo duboo arintan ayay OYSU soo dhawaysay.